URamaphosa ngeke abeyingxenye yomhlangano 'wokukhipha' uZuma esikhundleni - Umbiko | News24
URamaphosa ngeke abeyingxenye yomhlangano 'wokukhipha' uZuma esikhundleni - Umbiko
Johannesburg – Izikhulu eziphezulu zenhlangano ebusayo i-African National Congress zizobamba umhlangano ngeSonto noMengameli Jacob Zuma ukudingida ngokhishwa kwakhe esikhundleni, kubika iSunday Times, ecaphune imithombo esondelene nalolu daba.
Umhlangano, ozobanjelwa endlini kaMengameli osePitoli, kanti uzoholwa yiphini likamengameli we-ANC uDavid Mabuza kanti kulindeleke kuthathwe kuwona isinqumo mayelana nokuthi uZuma nguyena yini ozokwethula iNkulumo yeSizwe, kubika iphephandaba.
Kubikwa ukuthi umholi omusha we-ANC, uCyril Ramaphosa, ngeke abeyingxenye yomhlangano.
OLUNYE UDABA: I-ANC igxibhe uMagashule ngokuphawula kwakhe ngoRamaphosa
URamaphosa wangena esikhundleni sikaZuma ngemuva kokhetho lobuholi obusha kwi-ANC ngoDisemba.
Ihlandla lesibili likaZuma njengoMengameli wezwe liphela ngo-2019.
Okhulumela ihhovisi likamengameli akatholakalanga ukuphawula ngalolu daba.